Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato hoos u dhaca qabow ee Spain | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waad maqashay ereyga dhibic qabow markay waqtiyadan yimaadaan. Waana dhacdo saadaasha hawada oo badanaa dhacda ku dhowaad sannad kasta. Sababta ifafaalahan aadka looga hadal hayo ayaa ah iyada oo ay ku lug leeyihiin roobab culus, oo badanaa rabshad wata, kuwaas oo keena dabaylo waawayn iyo xitaa duufaanno yaryar.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa buubbaw qabow yahay iyo qaab dhismeedkiisu? Sii wad akhriska maxaa yeelay qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba.
1 Xaaladda cimilada ee daran
2 Sidee dhibicda qabow u samaysmaan
5 Qabow qabow gobolada qaar
Xaaladda cimilada ee daran
Hoos u dhaca qabow ayaa la diiwaan geliyey ku dhowaad sannad kasta xilligan oo kale. Waxay soo jiidanaysaa dareen badan iyadoo la ogyahay in rabshadkeedu yahay mid xad dhaaf ah. Diiwaanada waxaa ka mid ah, diiwaanka roobab urursan in lagag adkaaday hal saac oo kaliya. Kuwani runtii waa dhacdooyin aad u ba'an oo sababi kara waxyeello iyo burbur badan oo magaalooyinka ka dhaca. Sidaas darteed, magaalooyin badan ayaa koronto la'aan ah kaabayaashuna way soo baxayaan.
Hoos u dhaca qabow waxaa iska leh astaamaha kuweenna Cimilada Mediterranean ee ay ka diiwaan gashan yihiin roobab aan sidaa u badnayn oo isku urursan xilliga jiilaalka. Guud ahaan, roobabka intiisa badan waa kuwo daadad badan oo ay la socdaan waxyeelo badan.
Marka la duubayo roobka Micnaheedu maaha in roobabkan rabshadaha wata ay celcelis ahaan roobabka sannadlaha ahi si aad ah u koraanTaabadalkeed, waxay ku urursan yihiin muddo gaaban. Dhammaan meelaha Spain ku yaal ma laha heerar isku mid ah roobabka, laakiin halkii waxay ku urursan yihiin meel yar. Waxay noqon kartaa in hal magaalo inta badan roobabku ay soo daayaan, halka magaalada aan deriska nahay kaliya aan ka leenahay roobab fudud.
Sidii aan horay u soo sheegnay, Maaha markii ugu horreysay ee aad ku xanuunsato hargab qabow oo ay ku jiraan roobab rabshado wata, laakiin waxay dhacaan xagaaga kadib isdhexgalka hawo waawayn. Sawirada muuqaaladaas ba'an ay inaga tegayaan runtii waa kuwo cajiib ah waxayna abuurayaan burbur qarash badan oo dhaqaale.
Sidee dhibicda qabow u samaysmaan
Laakiin waxaan si joogto ah uga hadlaynaa baaxadda roobabkan iyo cawaaqibta ay leeyihiin oo kama hadlayno sida ay u samaysmeen. Waa maxay waxa kiciya xaaladdan oo kale? Hagaag, sida laga soo xigtay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka, AEMET, ayaa astaan ​​u ah asalka ifafaalehan niyad jab weyn oo dhererkeedu yahay cadaadiska meesha qaybta dhexe ay tahay hawada ugu qabow.
Waa cufnaan hawadeedu sarreyso (qiyaastii 5.000 mitir sare), waxay hoos u dhigeysaa cadaadiskeeda si weyn marka loo eego hawada ku hareeraysan. Niyad jabkan dhererkiisu wuxuu leeyahay bartamaha hawo qabow wuxuuna abuuraa daruuro duufaan ah oo soo daaya heerarka apocalyptic ee roobka. Markaad ka hadlayso ifafaalaha noocan ah, cufnaanta weyn ee hawada ee ka timaada kumanaan kiilomitir oo ay ka safri karaan ayaa lagu sifeeyaa.
Qalalaasahan iyo hoos u dhaca weyn ee cadaadiska kuma lahan saameyn deg deg ah ama milicsiga dhulka dushiisa. Taasi waa, kuma ogaanayno heerkayaga sida tooska ah wax looga qabto. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyin cabbiraad ayaa la sameeyay taas oo la muujiyay in hoos u dhaca qabow had iyo jeer uu leeyahay milicsiga heerar hoose. Tilmaamayaasha ugu badan ee soo noqnoqda badanaa waa dabaylo, roob, isbeddello lama filaan ah oo heerkulka ah ama xitaa cadaadis. Tan awgeed, hoos u dhaca qabow ayaa lagu ogaan karaa waqtiga si looga hortago cawaaqibkeeda.
Dadku badanaa waxay isku qaldaan dhibicda qabow iyo roobabkaas oo la yimaada dabayl qabow. Waa run in roobka noocan ahi caadi ahaan uu ka dhasho hoos u dhaca qabow. Si kastaba ha noqotee, isku mid ma aha. Hoos u dhaca qabowgu waa waqtiga dhaca natiijada ka dhalanaysa astaamaha cimilada Mediterranean-ka iyo niyad-jabka dhererka oo ay ugu wacan tahay cufnaanta hawada ee kala duwan
Astaamaha ugu muhiimsan ee hoos u dhaca qabowgu waa in la yeesho roobab waaweyn oo ku dhaca daqiiqado yar gudahood iyo meel aad u cayiman. Markii uu roob sidan u xoog badan u da'ayo waqti aad u yar, haddii meesha ay ku soo dhacdo ay tahay magaalo ama magaalo, guud ahaan, kaabayaashu diyaar uma aha inay hor istaagaan oo ay biyo marsiiyaan biyo aad u fara badan. Natiija ahaan, cawaaqib xumadu waa masiibo, oo sababa waxyeello culus oo maadiga ah iyo xitaa nafo.
Ka soo qaad in aad baabuur saaran tahay iyo in daadadka ay ku soo dhacayaan oo ay kugu jiidayaan xoog aan la rumaysan karin. Suuragal maaha in laga baxsado xaaladdan adigoon caawimaad dibadeed helin. Roobkan culus iyo duufaanta ma aha dhibicda qabow lafteeda, laakiin waa ifafaalaha la xiriira.
Sida laga soo xigtay AEMET, hoos u dhaca qabow waxaa loo isticmaalaa in si wada jir ah loogu gudbiyo ifafaalaha roobab daran, waxyeelo leh oo musiibo wata oo u horseeda xaalado saadaasha hawada oo aad u khatar badan. Dhibaatadu waxay tahay in fikraddani qaldan tahay. Sababtaas awgeed, AEMET way ka joogsanaysaa adeegsiga eraygan, kaasoo horseedaya jahwareer. Hoos u dhaca qabow ahaan fikrad ahaan wuxuu isu keenayaa waxyaabo badan oo aan sax ahayn.
Waa kaar duurjoog ah oo loo isticmaalo in looga hadlo dhacdooyinka qaab fidsan. Halkii ereygan la isticmaali lahaa, waxa ugu saxsan ayaa noqon kara duufaanno xoog leh iyo roobab joogto ah, maadaama ay dhici karaan iyadoo aan qabow hoos u dhicin. Hoos u dhaca qabow wuxuu gaar u yahay niyad jabka joogga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara duufaanno xoog leh oo wax dumiya oo aan daruuri ahayn niyadjab xagga dhererka ah.
Jahwareerkan awgood, maahan oo keliya dadka laakiin waxaa ku jira khubarada saadaasha hawada, waa la joojinayaa. Kaliya Spain iyo Jarmalka ayaa fikraddan weli loo adeegsanayaa, laakiin ka sii yaraanaya oo ka sii yaraanaya.
Iyada oo ay sabab u tahay ifafaalaha saadaasha hawada ee roobab daran iyo kuwo daran, magaalooyinka iyo magaalooyinka ay dhibaatadu saameysey ayaa daadadku qaadeen, laga bilaabo waddooyinka, gawaarida ilaa guryaha iyo dhulka hoostiisa. Magaalooyin badan waxay ku hareen koronto la’aan ama biyo la’aan. Waxay kuxirantahay baaxada iyo socodka, webiyada waxay kudhamaadaan inay buuxdhaafaan.
Qabow qabow gobolada qaar
Qabowgu kuma dhacayo dhammaan meelaha ka jira Spain si isku mid ah. Waxaan kahadleynaa gobolada qaar halka uu aadka u saameeyo.
Qabowgii ku dhacay Valencia Waxay abuurtay daadad fara badan, koranto goysay iyo wabiyada oo buux dhaafiyay. Waxay ka dhigeysaa in ka badan 40 arday dugsi la'aan.
Hoos u dhaca qabow ee Castellón waxay reebtay diiwaanka roobka 159 liitar oo biyo ah hal saac halkii mitir laba jibbaaran. Dab-demiyeyaashu waxay ku qasbanaadeen inay u dhaqmaan si ay u badbaadiyaan nolosha dadka weelasha qashinka waxaa qaaday biyaha xooggiisa.
Qabowga ku dhaca Alicante waxay sidoo kale dhibaato ba'an u gaysataa gobolkan. Si kastaba ha noqotee, kiiskan wuxuu ku qaatay tababar nasiib badan Gibraltar. Sida ku xusan maqaalka DANA, tan ugu caansan waa in lagu sameeyay jihaynta galbeedka-bari.
Qabowga ku dhacay Barcelona bishii hore waxay saameyn ku yeelatay dib u dhigista jadwalka tareenka. Tani waxay dhibaatooyin culus ku haysaa shaqada kumanaan qof marka lagu daro kaabayaasha dhaqaalaha ee burburay. Ilaa 235 litir halkii mitir laba jibbaaran saacaddii ayaa dhacday.
Sidaad aragtay, hoos u dhaca qabowgu wuxuu kicin karaa roobab culus oo sababa waxyeello daran, oo dhaliya kharashyo dheeri ah oo dhaqaale iyo argagax ku dhaca dadweynaha. Waxaan rajeynayaa in magaalooyinku ay sifiican isugu diyaarin karaan xaaladaha noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Qabow qabow